Hlola iPompeii, Italy - World Tourism Portal
Hlola iPompeii, Italy
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili ePompeii, e-Italy
Ongakwenza ePompeii, Italy.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePompeii
Bukela ividiyo ekhuluma ngePompeii
Hlola iPompeii eCampania, Italy, hhayi kude ne Naples. Ukuheha kwayo okukhulu yidolobha laseRoma elonakalisiwe elalibizwa ngegama elifanayo, elalakhiwe yiMt. IVesuvius ku-AD 79. Lesi yisiza samagugu emhlabeni wonke se-UNESCO. Ukuvakasha kwenziwa ngabavubukuli abaqeqeshiwe nabaqondisi.
IPompeii kwakuyisixazululo selokhu iNkathi yeBronze. AmaRoma alawula iPompeii ezungeze i-200 BC futhi yakhula yaba idolobha elikhulu. Ngo-Okthoba 24, i-79 AD, iVesuvius yaqhuma, yagqekeza idolobha eliseduzane lasePompeii ngomlotha nodaka, yabulala abantu base-3,000, lonke inani labantu base-20,000 selivele lababaleka, futhi lagcina leli dolobha lisesimweni salo kusukela kulolo suku olwalusondele. IPompeii yindawo yokumba kanye nomnyuziyamu ongaphandle komuzi waseRoma wasendulo. Lesi siza sithathwa njengesinye seziza ezimbalwa lapho kugcinwe khona idolobha lakudala ngokuningiliziwe - yonke into kusuka ezimbizeni kanye namatafula, ukuya emidwebo futhi abantu benziwa iqhwa ngesikhathi, banikezela, kanye neHerculaneum yangomakhelwane eyabhekana nesiphetho esifanayo, into engakaze ibonwe ithuba lokubona ukuthi abantu baphila kanjani eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule.
Lesi isiza sokuhamba kuphela. Kunamabhayisekili ambalwa okuqashwa, kodwa okuvele ngaphesheya kuyawenza ube nzima. Qaphela ukuthi ukuhamba ngemigwaqo yamatshe yakudala yaseRoma kungadinisa, ikakhulukazi ekushiseni kwehlobo kuthwale imithwalo yezivakashi ezikanye nazo. Wonke umuntu uzobe ehamba ngamatshe cobblestones kanye nomhlaba ongalingani. Izinga lokushisa liphakathi kwe-32 ne-35ºC ehlobo, futhi kunezithunzi ezimbalwa. Qinisekisa ukuthatha amanzi amaningi. Kunemithombo enamanzi aphuzwayo ngaphakathi emanxiweni. Bheka isinyathelo sakho njengoba imigwaqo yakudala ingalingani futhi inama-grooine kuyo lapho kugijinywa khona izinqola, futhi amadwala abushelelezi futhi angambozwa ngesihlabathi esihle. Kungcono ukuthi ugqoke izicathulo ezinhle, i-sunscreen nezigqoko. Kuningi okufanele kubhekwe ngakho futhi kungathatha usuku lonke ukubona konke.
Lapho uthenga ithikithi lakho kufanele uthole imephu yesayithi nencwajana ebala okuhehayo main. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi lezi zingabonakala ngaphandle kokuphrinta noma ungathola ukuthi okuwukuphela kwencwajana etholakala ngesiNtaliyane. Imephu yesayithi ibalulekile uma ufuna ukubona okuningi ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka. Ngisho nemephu evakashela iPompeii icishe ifane nohambo oluya e-maze. Imigwaqo eminingi, ngokusobala evulekile ngokusho kwemephu, iyavalwa ukuthi ivinjelwe ukumba noma ukulungisa izinto. Ungahle ucabange ukuthi ulibangise ekuphumeni kodwa bese kufanele ujike bese ubuyisa emuva izinyathelo zakho ukuthola enye indlela. Amamephu angaqukatha amaphutha amancane, futhi angakhombisi ukuthi yiluphi uhlangothi lwebhlokhi yokungena. Imephu futhi ayigcizeleli izindawo ezibaluleke kakhulu ngakho-ke kufanele uhlele kusengaphambili uma unohlelo oluqinile.
Inkundla yezemidlalo. Leli ekhoneni lesikhathi sendawo evulekile, eduze komnyango weSarno Gate. Iqediwe kwi-80BC, ilinganisa amamitha we-135 x 104 futhi ikwazi ukubamba cishe abantu be-20,000. Yindawo yokuqala yasinda engapheli in Italy futhi enye yezindawo ezigcinwe kahle noma kuphi. Kwakusetshenziselwa izimpi ze-gladiator, eminye imidlalo kanye nezibukeli ezibandakanya izilwane zasendle.
IGreater Palaestra (Gymnasium). Lokhu kuhlala endaweni enkulu ebhekene ne-Amphitheatre. Indawo ephakathi yayisetshenziselwa imisebenzi yezemidlalo futhi kukhona ichibi phakathi. Ezinhlangothini ezintathu kukhona i-porticos yangaphakathi ende noma amakholomu.
Indlu yeVettii. Lokhu kukholakala ukuthi bekuyikhaya labafowethu ababili abakhululwa baba yizigqila futhi baba ngabacebile kakhulu. Inamafresco amaningi. Ku-vestibule kune-fresco ekhangayo ye-Priapus ehlelwe kahle, uNkulunkulu we-Fertility futhi phakathi kwamafrescos kwezinye izingxenye zesakhiwo kukhona imifanekiso yemibhangqwana eyenza uthando, yama-cupid kanye nabalingiswa bezinganekwane. I-atrium yendlu ivulekile.
Indlu ye-Faun. Lokhu kuqanjwe ngemuva kwesifanekiso sefenisi lokudansa esitholakala esizeni. Kubhekwa njengesibonelo esihle kakhulu sokuhlanganiswa kwezitayela zokwakha zase-Italy nezamaGrikhi, futhi inendawo yonke.
Iforamu. Lesi kwakuyisizinda sempilo yomphakathi, noma manje sekuyindlela eseningizimu-ntshonalanga yendawo ebunjiwe. Kwakuzungezwe izakhiwo eziningi zikahulumeni ezibalulekile, ezenkolo nezamabhizinisi.
Ithempeli lika-Apollo. Lokhu kungasenyakatho kweBasilica ohlangothini olusentshonalanga kwalesi Sithangami. Inezinsalela ezindala kakhulu ezitholakele, ezinye, kufaka phakathi izinto ze-Etruscan, ezasemuva kwe-575BC, yize ukwakheka esikubona manje kwakungemva kwalokho.
Ithiyetha yakhiwe emgodini wegquma ukuze usizakale; ihleli i-5,000
I-Via dei Sepolcri (umgwaqo wamathuna) Umgwaqo omude onama-ruts agqoke kusuka ezimotweni.
I-Lupanar. Isitebhisi sasendulo esinezithombe ezingcolile zobuso ngaphambi komnyango wekamelo ngalinye, sibonisa izinsiza abazinikelayo. Ngisho nokuvumela usayizi omncane wamaRoma asendulo imibhede ibonakale incane.
Indlu Yendlu Yasendulo. Indlwana ekhangayo, evulekile enamafresco amaningi wezindawo zokuzingela.
IBasilica isentshonalanga yeForum. Bekungokwakhiwa komphakathi okubaluleke kakhulu kwedolobha lapho kwaqhutshwa khona ubulungiswa futhi kwaqhutshwa ukuhweba.
Iforamu Granary Artifacts efana ne-amphorae (izimbiza zokugcina) nezinto zokukhonkolo zabantu ezingaphunyukanga kulokhu kuqhuma zigcinwa kuleli bhilidi, elakhelwe ukuba kube yimakethe yomphakathi kodwa kungenzeka ukuthi lingaqedwa ngaphambi kokuqhuma.
Kunezindawo zokugeza eziningana ezizohlolwa. Izithangami zeForamu zingasenyakatho yesithangami futhi ziseduze nendawo yokudlela. Zigcinwe kahle futhi zophahla. Qikelela ukuthi ungabaphuthelwa njengoba indlela yokungena iyindinyana ende ngaphandle kokubonisa okujabulisa ngaphakathi. Ama-Central Baths ahlala endaweni enkudlwana kepha angagcinwa kahle. Eduze kwalawa kubhajwa ama-Stabian anokuhlobisa okuthokozisayo futhi anikeze umbono omuhle wokuthi amabhati asetshenziswa kanjani ngezikhathi zamaRoma.
Indlu Yesibongo Esibuhlungu. Le ndlu encane ye-atrium yaziwa kakhulu nge-mosaic ekungeneni okubonisa inja eboshwe, ngamagama athi Cave Canem noma "Qaphela inja".
Uzobona emhlabathini kunama-tile amancane abizwa ngamehlo wekati. Ukukhanya kwenyanga noma ikhandlela kukhanyisa la tile futhi kunikeze ukukhanya, ukuze abantu babone lapho babehamba khona ebusuku.
Amabha namakhekhe Uzohamba udlule lapho imigoqo yakho namabhaka bekukhona khona. Amabha lawo ayenezinto zokubala ezinezimbobo ezintathu kuya kwezine. Zinamanzi noma ezinye iziphuzo ezitholakala emigodini. Ovuni bamabhaka babukeka befana ne-oveni endala yamatshe yezitini. INdlu yeBhakabhaka inendawo engadini enamatshe okugaya asetshenziselwa ukugaya ukolweni.
Street Kukhona amathrekhi ezimoto ezithwala imigwaqo emgwaqweni ukuze uhambe kahle. Kukhona namabhulokhi amatshe emgwaqweni abantu abahamba ngezinyawo abangene kuwo ukuze bawele umgwaqo. Imigwaqo eseceleni iphakeme kunendlela yomgwaqo yanamuhla ngoba imigwaqo yayinamanzi nokungcola okuhamba phakathi kwawo. Amatshe amatshe asemgwaqweni nawo ayephakeme ngendlela yomgwaqo, ngakho-ke abantu abahambanga ngemfucuza namanzi. Amabhulokhi amatshe ayesetshenziselwa lokho manje esibizwa ngokuthi ama-speed bumps. Lapho izinqola zidlula phakathi komuzi, zazihamba ngejubane elikhulu. Ukugwema abantu ukuthi bangaphazanyiswa amanzi nemfucuza babenezivimbamgwaqo zamatshe emgwaqweni. Lokhu kungenza umshayeli wehlise ijubane lapho beshesha, ukuze bakwazi ukungena emabhulokini.
I-villa dei Misteri (i-villa of the Mysteries) Indlu enama-frescoes afisa ukwazi, mhlawumbe abesifazane bangeniswa kwi-Cult of Dionysus. Kuqukethe omunye wemijikelezo yefresco enhle kakhulu e-Italy, kanye ne-graffiti yasendulo ehlekisayo.
Edolobheni lesimanjemanje lasePompei:
KuneSancwele (isonto) okuyindawo yokuhambela amaRoma Katolika. Kwabanye, akuyona into okumele uyibone, kepha uma kufanele ufike noma ushiye isiteshi sasePompei Santuario esisekelweni seSumumvesuviana, kunePompei Scavi, ungakuthola kufanele ukubukelwa okufushane ngaphakathi kule ndawo yokunikela iNcasakazi. UMariya.
Thenga incwadi yomhlahlandlela. Thola umhlahlandlela osemthethweni osendaweni yokubhuka yesayithi eseduze nehhovisi lamathikithi. Izinkombandlela eziningi namamephu kuyatholakala kepha lokhu kuhlanganisa ngokucophelela lezi ezimbili. Τ Lapha futhi yinguqulo yolimi lwesiNgisi yencwadi yeziqondisi.
Vakashela futhi iNational Archaeological Museum e Naples (kuvalwe uLwezibili), lapho iningi lezindatshana zezithombe ezigcinwe kahle nezitholakala kuPompeii zigcinwa. Cishe kusiza kakhulu ukwenza lokhu kuqala, njengoba isiza esingenayo incwadi egcwele yomhlahlandlela siyadida ngaphandle kokuthi ufike wazi ukuthi kungani ubukeka njengoba unjalo nokuthi kungani ama-frescoes nezinto zobuciko bebaluleke kakhulu ukuqonda impilo e-79AD.
Vakashela futhi indawo kadade iHerculaneum, okumbalwa kuphela weSetyumvesuviana eyeka ukuhlukana futhi wehlelwa yinto efanayo nePompeii. Noma kuyisayithi elincane elimbozwe ukuhlinzwa kwe-pyroclastic (esikhundleni somlotha kanye ne-lapilli eyamboza iPompeii). Lokhu kwavumela ezinye izindaba zesibili ukuba zisinde.
Uma unezinsuku eziningi, vakashela futhi neziza ezinhle kakhulu: i-Oplontis (indawo yokumisa iTorre Annunziata, isitobha esisodwa seSetyumvesuviana ukusuka ePompeii) noma eStabiae (futhi ngesitimela esifanayo).
Bheka ama-villas angahleliwe, njengoba kwesinye isikhathi amakamelo amancane aseceleni anamafrescoes amangalisayo (imidwebo yodonga).
Ungaphuthelwa "Ingadi Yabavunyi" ngasohlangothini oluseningizimu-nasempumalanga lapho ukhonkolo odonsa izisulu eziningana (ngokudabukisayo, kufaka phakathi nezingane) zikhonjiswa lapho zawa khona Izitshalo ezikule ngadi zakhiwe kabusha ukuze zifane nokukhula kwasendulo, ocwaningweni lokukhonkolo okwenziwe ngotshani kwezimpande zezitshalo.
Hamba ngaphandle kweCity Gates uye eVilla of the Mysteries, enye yezindlu ezinkulu kunazo zonke ezokwehlela kithi ezivela emhlabeni wasendulo. Noma ngosuku olushisa kakhulu, kufanelekile ukuhamba.
Buza omunye wabavubukuli osebenza kwenye yamasayithi amaningi ukuthi “Ngabe konke lokhu akwenziwanga?” (Kusene-1 / 3 yesayithi elingathandeki… futhi kuhlala kukhona okungaphansi komhlaba phansi!)
I-ATM itholakala endaweni yehhovisi lamathikithi eduze kwesiteshi sesitimela iPompei Scavi, akukho-ATM ngaphakathi kwesiza futhi amakhadi wesikweletu awemukelwa, ngakho-ke qiniseka ukuthi ulethe ukheshi olwanele ngezidingo zakho.
Kunesakhiwo sanamuhla senkantolo sokudla esinezimo zomoya enkabeni yalesi siza. Iziphuzo ezithambile, i-cafe, i-pizza, izifundo eziphambili, ama-sandwich, crisps, nezinye izinto ziyatholakala ukuthi zingathengwa. Amakhadi wesikweletu ayemukelwa. Lokhu ngokujwayelekile kuzoba yiyona kuphela inketho yakho yasemini ngaphakathi kwesiza, noma ukudla kuvunyelwe ngaphakathi, njengoba uzobona amaqembu amaningi abavakashela e-Asia eyeka ukudla izidlo zohlobo lwebhokisi le-bento.
Thenga incwadi yomhlahlandlela wokuvakasha ukuze ufunde kabanzi ngomlando wedolobha ojabulisayo, izakhiwo nokwakha izinto zobuciko. Kuningi esingakufunda kwabaseRoma nokubona ukuthi baphila kanjani.
Endleleni esuka esiteshini uye ekungeneni okusemthethweni lokungena kwezitolo zama ukuthengisa izinto ngamanani abiza kakhulu kodwa ukudla akuveziwe. Iziphuzo, ikakhulukazi ama-orange asanda kucindezelwa kanye namalamula kalamula, amnandi kakhulu ikakhulukazi ekushiseni, yize enamanani amancane.
Ungathola i-panino enhle kakhulu (umqulu wesinkwa ogcwalisiwe) kusuka kwezinye izitebhisi.
Kukhona indawo yokudlela kanye nendawo yokudlela endaweni yokumba, nje enyakatho yeForamu. Akumangazi ukuthi lokhu kubiza kakhulu futhi akukuhle ikakhulukazi. Noma kunjalo, kuyindawo elungile ukuthatha ikhefu futhi uphinde ululame, ikakhulukazi ngomoya wayo. Uma ungenaso isikhathi sokuphumula ungabamba u-ayisikhilimu ewindini lenkonzo elibheke emgaqweni. Indawo yokudlela inezindlu zangasese, kubukeka sengathi yizo kuphela esizeni.
Khumbula ukuthatha amanzi anele okuphuza njengoba kushisa impela emigwaqweni enothuli. Gcina amabhodlela akho angenalutho ukuze agcwaliswe kabusha njengoba kukhona ompompi bamanzi ngezikhathi ezithile abasabalalisa isiza kunamanzi anukayo anganambitheki, nokho, kubonakala sengathi ayaphuza.
I-Lemon ne-Orange granita ethengiwe ngaphandle kwendawo iyindlela emnandi yokuphola.
Iya ngesitimela uye Naples, indawo azalelwa kuyo ipitsa. Amanye ama-pizzerias akalwa kakhulu amabhulokhi nje ambalwa ukusuka esiteshini sesitimela.
Vakashela indawo kadadewethu yaseHerculaneum
Yibhekise epaki elingaphansi kwamanzi i-Archaeological Park yaseBaiae
Thatha uhambo oluya e-Amalfi Coast
Thatha isikebhe esivela eNaples noma eSorrento esiqhingini saseCapri
Amabhasi aya eMt. Vesuvius kusuka esizeni.